प्रविधि/समाचार/२०१८/३३ - Meta
This page isatranslated version of the page Tech/News/2018/33 and the translation is 100% complete.
प्रविधि समाचारले सम्पूर्ण सफ्टवेयर परिवर्तनहरू जसले तपाईँ र तपाईँजस्ता सहकर्मी विकिमिडियनहरूलाई प्रभावहरूमाथि नजर राख्न सघाउन सारांश हरेक हप्ता पस्किन्छौँ। सदस्यता लिनुहोस्, योगदान दिनुहोस् र सुझाव दिनुहोस्।
previous 2018, week 33 (Monday 13 August 2018) next
Deutsch • ‎English • ‎Tiếng Việt • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎lietuvių • ‎polski • ‎suomi • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎українська • ‎עברית • ‎العربية • ‎فارسی • ‎नेपाली • ‎हिन्दी • ‎中文 • ‎日本語 • ‎ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ • ‎한국어
पछिल्लो प्रविधि समाचार विकिमिडिया प्राविधिक समूदायबाट । कृपया अन्य प्रयोगकर्ताहरूलाई पनि यी परिवर्तनहरूको बारेमा भन्नुहोस् । सबै परिवर्तनहरूले तपाईँलाई प्रभावित गर्दैन । अनुवादहरू उपलब्ध छन् ।
सबै विकीहरूमा टेम्प्लेटका CSS हरू अब अर्को फाइलमा राख्न सकिन्छ । यसलाई टेम्प्लेट स्टाइल भनिन्छ । यो टेम्प्लेटको सजावट सम्पादन गर्नको लागि सहज बनाउन हो । 
यस हप्ताको अन्तमा परिवर्तन गर्नुहोस्
यस हप्ता कुनै नयाँ मेडियाविकी संस्करण छैनन् ।
अब अर्को बैठक सम्पादन समूहसँग गर्न सक्नुहुनेछ । तपाईँले बैठकमा विकासकर्ताहरूलाई कुन बगहरू बढी महत्वपूर्ण छन् भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। बैठक १४ अगस्ट at 19:30 (UTC) मा हुने छ। कसरी सहभागी हुने हेर्नुहोस् ।
IRC मा तपाईँले प्राविधिक सल्लाह बैठकमा सहभागी हुनसक्नुहुन्छ । बैठकमा स्वयंसेवी विकासकर्ताहरूले सल्लाह माग्न सक्नेछन् । बैठक १५ अगस्ट १५:०० (UTC) मा हुनेछ । कसरी सहभागीहुने हेर्नुहोस् ।
विकासकर्ताहरू प्रयोगकर्ताहरूलाई रोक लगाउने थप तरिकाहरूको योजना गर्दै छन् । यो कुनै पनि प्रयोगकर्तालाई कुनै एक लेख या नेमस्पेसमा लेख लेख्न रोक लागाउने जस्तो हुनसक्छ । तपाईँले थप पढ्न सक्नुहुन्छ । तपाईँले वार्तालाप पृष्ठमा तपाईँको सुझाव दिनसक्नहुन्छ । 
प्रविधि समाचार प्रविधि समाचार लेखकहरूले तयार पारेका हुन् र बोट ले प्रेषण गरेको हो • योगदान दिनुहोस् • अनुवाद गर्नुहोस् • सहायता पाउनुहोस् • सुझाव दिनुहोस् • सदस्यता लिनुहोस् या सदस्यता हटाउनुहोस्.
Retrieved from "https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Tech/News/2018/33/ne&oldid=18402499"
This page was last edited on 22 September 2018, at 07:42.